Nosakanana Ny Bilaogy Shinoa Malaza Miisa Telo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2017 15:53 GMT
FANAVAOZAM-BAOVAO: Farafahakeliny roa tamin'ireo bilaogy ireo no ny solony sisa hita. Jereo any amin'ny fanehoan-kevitra , na ity lahatsoratra famintinana ity.
Voasakana ny BSPs an'ny bilaogera Shinoa malaza miisa telo, anisan'izany ny an'ny iray amin'ireo bilaogera malaza indrindra ao amin'ny firenena sy ny mpandresy tamin'ny DW Bilaogy Tsara Indrindra , Milk Massage (Otra Ronono).
Milk Massage(Otra Ronono), Milkpig(Rononon-kisoa) ary Pro State in Flames (Mpanohana Fanjakana Mirehitra na Tatavia Mirehitra) ireo bilaogy telo ireo. Ny Yculblog no nampiantrano ny bilaogy roa voalohany ary ny Sohoxiaobao no nampiantrano ilay farany. Amin'izao fotoana izao, raha miezaka miditra amin'ireo bilaogy ireo ianao dia hahazo hafatra tahaka ny hoe “Nakatona vonjimaika ity bilaogy ity noho ny antony tsy azo anoharana fantatsika rehetra” na “Noho ny antony tsy ara-teknika dia mikatona nanomboka androany ity bilaogy ity”. Indro ny dikasary .
Raha ny hita dia tsy avy amin'ny governemanta ity fanakanana ity fa avy amin'ireo olon-tsotra ao amin'ny Sampan-draharaha Mpanome Tolotra Bilaogy izay mihevitra ireo bilaogy miisa telo ireo ho manafintohina sy mampidi-doza. Manana tantara i Danwei. Mampitaha izany amin'ny bilaogera iray hafa ihany koa izy, izay mpikambana iray ao amin'ny CPPCC , fivoriana mampifandray fanao isan-taona ao Beijing.
Namakafaka ny antony mahatonga ny fanakanana ny Hellomedia, bilaogy iray natokana hanarahana ny fivoaran'ny ny media vaovao. Nihevitra izy raha nampiseho ny pikantsary iray dia fa ny fitenenana ny FaLungong no nanakatonana ny bilaogy Milk Massage. Ho an'i Milkpig kosa dia toa tsy dia mazava loatra izany satria niresaka momba ireo tantara malaza sy ny fosafosa fotsiny ihany izy. Ary ho an'ny “Pro State in Flames”, dia efa ela no naherisetra ara-politika izy ary nosakanana satria natao tao Beijing ny fihaonambe ara-politika roa lehibe : CPPCC sy CPC.